Iindaba - Ukusetyenziswa kwekalika ekhawulezayo
I-QUICKLIME iveliswa kwi-limestone equlethe umxube we-calcium kunye ne-magnesium carbonates.
Zombini i-calcium quicklime ephezulu kunye ne-dolomitic quicklime ziveliswa ngokufudumeza iidiphozithi zekalika ekrwada kwi-oven ukuya kumaqondo obushushu angama-900. Le nkqubo ibizwa ngokuba yinkqubo yokubala.
Iimveliso ze-quicklime zihlala zigutyungelwa kumandla acikizekileyo ekubhekiswa kuwo NJENGOKO OKUQHUBEKAYO OKUKHAWULEZAYO olungele ukuxutywa nezongezo okanye ezinye izinto ezikhokelela kwiikompositi ezikhethekileyo ezidityanisiweyo. Ngenxa yobume bekhemikhali yezinye izongezo, i-quicklime inokuba "i-Fluidized", oko kukuthi, ineempawu zokuba nolwelo oluphezulu. I-quicklime eyi-fluidized ilungele ukusetyenziswa kunye neenkqubo ezikhethekileyo zokuphatha izinto eziphathekayo ukwenzela ukuhamba kakuhle kunye nokuphepha ukuvala.
I-Quicklime inokuphinda ifakwe emanzini, kwinkqubo ebizwa ngokuba yi-slaking, ebangela ukuba i-HYDRATED QUICKLIME (okanye i-calcium hydroxide), imveliso eyomileyo eyomileyo ye-powder esebenzayo kwaye isebenze ngokusetyenziswa okuninzi.
Inokusetyenziswa kwakhona njenge-analytics reagents, i-spectral analysis reagent, indlela ye-phosphor. I-solvent encedisayo, i-oyile yemifuno yokucoca i-oyile, uhlalutyo lwegesi, isetyenziswe kwi-carbon dioxide absorber. I-reagents ezininzi ezisetyenziselwa ukuveliswa kwe-semiconductor ye-denotation, kunye nenkqubo yokusabalalisa.
Usetyenziso Oluthe ngqo:
1) Ukusetyenziswa kuhlobo ngalunye lwesondlo esongezelelweyo ubungakanani becalcareous ukuya kufikelela kuma-55.6 ngaphezu kwezinto ezichasayo
2) Ngokwenza iiplasitiki zityale, umzi-mveliso werabha, umzi-mveliso wokugquma, indawo yokugcina amanzi engangeni manzi imathiriyeli ekrwada kunye neendonga zangaphakathi nangaphandle zokucakwa mhlophe. Albedo ngaphezu kwama-85 degrees.
3) Isebenzisa ekwenzeni amaqhosha ebhodi, iwela emanzini umbhobho, ishishini lemichiza. Albedo ngaphezu kwama-93 degrees.
4) Ingasebenzisa kumzimba wokuncamathelisa amazinyo, isepha. Albedo kwi-94 degree ngaphezulu
5) Isebenzisa irabha, iplastiki, intambo yombane, i-pvc albedo kwi-94 degree ngaphezu
6) I-Pvc, i-PE, ipeyinti, imveliso yezinga lokugubungela, i-papermaking bottom isasazeka, i-papermaking surface isasazeka, i-albedo ngaphezu kwe-95 degrees. Ngaba, i-albedo ephezulu, i-non-toxic, i-oillessness, i-oyile ebhityileyo iya kuba yi-low high-purrity, i-degree of hardness iphantsi.
Izixhobo zokuLungisa iCalcium Hydroxide, ICalcium Hydrooxide Processing, ICalcium oxide Production Line, Ukwenza iCalcium Hydroxide, Ukwenza iCalcium Hydroxide, I-Calcium oxide esetyenziswa kwezoLimo,